Isikhululo soMbane esiyiTongren Hydropower Station seProjekthi yokuLungiswa koMsebenzi
Izicelo: Ulawulo loMkhukula, ukuvelisa umbane ngamanzi
Idama eliphakanyisiweyo elenziwe lula (SED) lidama elitsha elisebenzisa impompo okanye i-injini yedizili ukulawula iiphaneli phezulu nasezantsi ukugcina amanzi nokukhupha. Ukuqala kokutsha kwitekhnoloji yoxinzelelo lwempompo yesandla kwaye ayifuni mbane. I-SED isebenza ngakumbi kummandla wombane nonxweme lolwandle. Okwangoku, ikhuthazwe ngokubanzi eMyanmar, Bangladesh, Vietnam nakwamanye amazwe.
Idama lerabha Intshayelelo
Idama leRabha Intshayelelo Idama lerabha luhlobo olutsha lwesakhiwo esihamba ngesanti kubunzulu baphantsi xa kuthelekiswa nesango lesinyithi sentsimbi, kwaye lenziwe ngelaphu elomeleleyo elinamathela kwirabha, elenza ingxowa yerabha ebambelela kumgangatho ongaphantsi wedama. Ukuzalisa amanzi okanye umoya kwingxowa yedama, idama lerabha lisetyenziselwa ukugcinwa kwamanzi. Ukukhupha amanzi okanye umoya kwingxowa yedama, isetyenziselwa ukukhutshwa kwezikhukula. Idama lerabha linezinto ezininzi eziluncedo ngokuthelekiswa nendlu eqhelekileyo, njengexabiso eliphantsi, ulwakhiwo olulula lwamanzi, ulwakhiwo olufutshane ...
Intshayelelo yesiCwangciso sokuCoca amanzi
Ukungeniswa kwesiCwangciso sokuCocwa kwaManzi esineContainer Isityalo soCociweyo saManzi siyimveliso esemgangathweni yesikhongozeli ephuhliswe yiBeijing IWHR Corporation (BIC). yenzelwe ukuba icocwe isixa esincinci samanzi. Umatshini woNyango lwaManzi oCwangcisiweyo wahlulwe wazindidi ezimbini ezahlukeneyo zoluhlu: (1) Olunye lonyango lwamanzi amdaka lokusetyenziswa kwakhona: (Umzi-mveliso oCociweyo waManzi oNgcolileyo); (2) Enye kukucocwa kwamanzi okusela; (Isixhobo sokucoca amanzi).
Injongo: Ukubonelela ngezona zisombululo zingcono kwiiprojekthi zonyango lwamanzi.
Ukubonelela ngezixhobo zokucoca amanzi ezingabizi kakhulu.
Ukwenza ukuba abantu babe namanzi acocekileyo kunye namanzi amatsha.
Ixabiso: Intembeko yokuthembeka kwiTekhnoloji ejolise ebantwini
Iimbonakalo:Inkqubo / isisombululo esenziwe ngokufanelekileyo
Ukusebenza kwe-2 ephezulu ngokusebenza kakuhle kweendleko
Ukusebenza okuphezulu kwe-3 / ukusetyenziswa kwamandla aphantsi
Ukuthembeka okuphezulu kwe-4 / umjikelo wobomi obude
Umsebenzi 5.Simple kunye nokugcinwa ngaphantsi
6.Small footprint / Ukuthembeka
7. Ukufuna "ubugcisa bokwenza"